Yosef kopuee Potifar fi (1-6)
Yosef ampene so amma Potifar yere (7-20)
Yosef kɔdaa afiase (21-23)
39 Wɔde Yosef kɔɔ Egypt,+ na Egyptni Potifar a ɔyɛ Farao mpanyimfo no mu baako,+ awɛmfo so panyin no, tɔɔ no fii Ismaelfo+ a wɔde no kɔɔ hɔ no nkyɛn. 2 Nanso Yehowa dii Yosef akyi,+ enti esii no yiye, na ne wura Egyptni no de ne fi hɔ nneɛma hyɛɛ ne nsa. 3 Afei ne wura no hui sɛ Yehowa di n’akyi, na biribiara a ɔde ne nsa beso mu no, Yehowa ma ɛyɛ yiye. 4 Yosef nyaa n’anim dom na ɔbɛyɛɛ ne somfo a ɔbɛn no. Enti ɔde ne fi hyɛɛ ne nsa na ɔma ɔhwɛɛ biribiara a ɔwɔ so. 5 Efi bere a ɔde ne fi hyɛɛ ne nsa na ɔma ɔhwɛɛ biribiara a ɔwɔ so no, Yosef nti Yehowa hyiraa Egyptni no fi; Yehowa hyiraa nea ɔwɔ nyinaa so, nea ɛwɔ ofie ne nea ɛwɔ afuw mu.+ 6 Eduu baabi no, na ne biribiara wɔ Yosef nsam. Enti wamfa biribiara anhaw ne ho; aduan a obedi nko ara na na ɛho asɛm hia no. Afei nso, Yosef nyin bɛyɛɛ ɔbarima mũ a ne ho yɛ fɛ. 7 Akyiri yi, ne wura yere de n’ani sii no so, na ɔka kyerɛɛ Yosef sɛ: “Wo ne me mmɛda.” 8 Nanso wampene, na ɔka kyerɛɛ ne wura yere no sɛ: “Hwɛ, nea ɛkɔ so wɔ ofie ha nyinaa, me wura agyaw ama me, na ɔde biribiara a ɔwɔ ahyɛ me nsa. 9 Obiara nni hɔ a ɔyɛ kɛse sen me wɔ ofie ha, na ɔmfa biribiara nkame me gye wo, efisɛ woyɛ ne yere. Enti ɛbɛyɛ dɛn na matumi adi amumɔyɛsɛm a ɛte sɛɛ na mayɛ bɔne atia Onyankopɔn?”+ 10 Enti da biara, na ɔde asɛm no guan Yosef ho, nanso wampene sɛ ɔne no bɛda anaa ɛbɛka ɔne ɔbea no nko ara. 11 Da bi, ɔkɔɔ fie hɔ sɛ ɔrekɔyɛ n’adwuma, na na nkoa a wɔwɔ ofie hɔ no mu biara nni hɔ. 12 Afei ɔbea no soo n’ataade mu kae sɛ: “Wo ne me mmɛda!” Nanso ogyaw n’ataade no maa no na oguan fii adi. 13 Bere a ɔbea no hui sɛ Yosef agyaw n’ataade wɔ ne nsam na waguan afi adi no, 14 ofii ase teɛteɛɛm frɛɛ mmarima a wɔwɔ ofie hɔ sɛ: “Monhwɛ! Wakɔfa Hebrini barima yi aba sɛ ommedi yɛn ho agoru. Ɔbaa me nkyɛn sɛ ɔne me rebɛda, ɛnna meteɛteɛɛm denneennen. 15 Bere a ɔtee sɛ mereteɛteɛm no, ogyaw n’ataade wɔ me nkyɛn, na oguan fii adi.” 16 Ɛno akyi no, ɔde ataade no guu ne nkyɛn kosii sɛ ne wura no baa fie. 17 Na ɔkaa asɛm koro no ara kyerɛɛ no sɛ: “Hebrini akoa a wokɔfaa no baa ha yi baa me nkyɛn sɛ ɔrebedi me ho agoru. 18 Nanso bere a meteɛteɛɛm denneennen no, ntɛm ara na ogyaw n’ataade wɔ me nkyɛn, na oguan fii adi.” 19 Bere a ne wura tee asɛm a ne yere kae sɛ: “Sɛɛ ne sɛɛ na w’akoa no ayɛ me” no, ɛhyɛɛ no abufuw. 20 Enti Yosef wura no de no kɔtoo afiase, baabi a ɔhene nneduafo gu no, na ɔkaa afiase hɔ.+ 21 Nanso Yehowa kɔɔ so ara dii Yosef akyi, na ɔdaa ne dɔ a enni huammɔ adi kyerɛɛ no, na ɔma onyaa ɔpanyin a ɔhwɛ afiase hɔ no anim dom.+ 22 Enti afiase panyin no de nnipa a wogu afiase hɔ nyinaa hyɛɛ Yosef nsa, na ɔno na na ɔhwɛ ma wɔyɛ biribiara wɔ hɔ.+ 23 Na biribiara a ɛhyɛ Yosef nsa no, afiase panyin no anhaw ne ho wɔ ho, efisɛ na Yehowa di Yosef akyi, na nea ɔyɛe biara, Yehowa hwɛ ma ɛyɛɛ yiye.+